Gadzira negadziriro yeparutivi (negadziriro yeparutivi) zvose zviri iPhone wako: SMS, neshamwari, Calendar, manotsi, etc | IPhone nhau
Gadzira negadziriro yeparutivi (negadziriro yeparutivi) zvose zviri iPhone wako: SMS, neshamwari, Calendar, manotsi, etc.
Gadzira a backup ye iPhone yedu yakakosha sezvo iri nyore. Apple inotipa maviri masystem, ane iTunes uye iCloud, ayo akanaka kwazvo, asi aya makopi haagare akakwana, saka tinogona kurasikirwa neimwe data multimedia, pakati pezvimwe zvinhu. Panyaya yeICloud, iyo kopi yakagadzirwa inoganhurirwa uye mamwe mafoto haazotorerwa, semuenzaniso.
Kune rimwe divi, maTunes makopi akachengetwa mufaira risingasvikike, saka hatigone kuziva zviri mukati kuti tide kubvunza chimwe chinhu, tisingatauri kuti kana tichida kudzoreredza faira rimwe chete tinofanirwa kudzoreredza rese kopi. nekurasikirwa nenguva izvo zvinotora. Neraki pane maturusi anotibvumidza isu kuita kopi yeiyo 100% yedata redu uye kuti tichazokwanisa kubvunza chero nguva. Dambudziko nemidziyo iyi nderekuti vanobhadharwa.
1 Maitiro ekuita yakazara backup ye iPhone
1.1 Xilisoft Zvishandiso
1.2 CopyTrans Shelbee
2 Uchishandisa iTunes kana iCloud
Maitiro ekuita yakazara backup ye iPhone
NaXilisoft iPhone Mashiripiti isu tine mhinduro yakakwana kugadzirisa zvirimo mu iPhone / iPod / iPad yedu. Inowanikwa Windows uye Mac uye inotipa zvinotevera:
Kutamisirwa kwemimhanzi, mafoto, mabhuku, matoni uye kunyorera kubva kune yedu iPhone kuenda kukomputa yedu.
Sevha shamwari uye mameseji.
Kopa mapikicha kubva ku iPhone kana iPad kune komputa.
Ane a mutengo we € 42, iyo isiri yakanyanya mari, asi kana zvichidikanwa inogona kunge iri yakakodzera.
Kutora - Xilisoft
Inowanikwa chete yeWindows, CopyTrans 4Pack ndeye turusi boka izvo zvichatibvumira isu chinjana uye gadzira makopi kubva ku iPhone / iPod / iPad kukomputa yedu yeanotevera:
Mumhanzi, playlists, maapplication, mavhidhiyo, mabhaisikopo, TV zvinoratidzwa, matoni, izwi memos, mabhuku, maPDF, audiobooks, podcast, uye iTunes U.
Maficha, makarenda, mameseji, zvinyorwa, mabhukumaki, uye zviyeuchidzo
Mifananidzo uye mapikicha emifananidzo.
Chengeta makopi epaibhurari yedu iTunes kusanganisira makopi eIOS
Tichava neimwe nzira kune iTunes, inonzi CopyTrans Manager, iyo ichatibvumidza kudzoreredza multimedia mafaira senge mimhanzi.
Ane a mutengo we € 30, yakachipa pane Xilisoft chikumbiro uye unayo inowanika pawebsite yavo.
Inowanikwa chete yeMac, PhoneView ichatibvumira kuti tigadzire makopi ekuchengetedza ei iPhone yedu. Icho chiri nyore kwazvo kushandisa application uye tinogona kutevedzera zvinotevera kubva ku iPhone yedu kuenda kuMac kwedu:
Dhata: vanofambidzana, manotsi, danda rekufona, mameseji, mabhukumaki, voicemail, kunyorera uye zvinyorwa zvekushandisa.
Multimedia: mimhanzi, mavhidhiyo, mabhuku, podcast, matoni, mapikicha uye manotsi ezwi.
Ane a mutengo we $ 29,95 uye iwe unogona kuiwana kubva kune ecamm webhusaiti.
Kutora - PhoneView
Uchishandisa iTunes kana iCloud
Kana pasina imwe yenyaya dziri pamusoro apa inokugutsa, kunyanya nekuti inobhadharwa, in iyi posvo tinokuratidza sei negadziriro yeparutivi iPhone wako uchishandisa iTunes kana iCloud, sarudzo dzakapihwa neApple seyakajairwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Gadzira negadziriro yeparutivi (negadziriro yeparutivi) zvose zviri iPhone wako: SMS, neshamwari, Calendar, manotsi, etc.
Mhoroi, chii sosi yekumisikidza iyo iPhone Daemon? Chii chinonzi Cheking?
Iyo iPhone Daemon haisi app, irwo rudzi rwekuenderana chigamba chinodiwa kushandura iphone / ipod kubata nePCSuite, uye zvakafanana nekuona kuti chigamba ichi chakaiswa nemazvo, zvakanakisa kuti iwe chiise kuitira kuti iwe ziva kuti zvichaita kuti zvive nyore kwauri.
Wakamboedza kuita kudzoreredza mune imwe firmware (iyo inoremekedza iyo dhairekitori odha "var / mobile /" ????
Kana ikashanda, chichava chishandiso chinoshanda zvakapetwa
… Ita Negadziriro yeparutivi (negadziriro yeparutivi) zvose zviri iPhone wako: SMS, neshamwari, Calendar, manotsi, etc.
Yakatumirwa muna Chikumi 22, 2008 na merkamovil
Neiyi dzidzo iwe unogona kuita inenge izere backup ye iPhone yako yese.
Chirongwa chinotsigira zvese zvinotevera: (Sarudza zvaunoda)
* Mifananidzo * app Tsigiro * icosta Mufananidzo
* Raibhurari yemifananidzo * Dana data * Springboard icon yekuraira
* iPod * ABphoneFormats.plist * Safari Mabhukumaki
* Zvinyorwa * Ebook * Tsamba
* SMS * Ringtones * Karenda
* Danda rekufona * Zhizha reBoard Themes * Mafoni
* weDict Duramazwi * PDF….
Pindura kune http://merkamovil.wordpress.com/2008/06/22/hacer-backuprespalalode-todo-el-contados-de-tu-iphone-smscontatoscalendarionotas-etc/
Uye inoshanda kune 3G?
Pindura kuna krewx
Yangu iphone yakanamatira, iri sei, ini ndinogona kudzoreredza daemon nekuti harizondibvumire kuti ndirimise zvakare, yangu pc sutu inogona kufarira mhinduro yako.
Kaiser Z akadaro
Pindura Kaiser Z
Ini ndatorodha pasi iyo Pc Suite, mhanyisa iyo iphone pc suite.exe, uye zvese zvanaka, asi pandinobatanidza iphone yangu, inonditumira iyi kukanganisa PhoneDaemon yasangana nedambudziko uye inoda kuvhara. Tine urombo fot nekusagadzikana. Uye ndosaka ndisingakwanise kuita vandinoshamwaridzana navo backup, ndizvo zvinonyanya kundifadza, sezvo ini ndichida kuidzosera ku2.1 asi ndine vakawanda vandinosangana navo. kana uchigona kundibatsira ndapota nyorera kuna barusisimo@hotmail.com
A uyezve neese .exe Ndakaedza uye pamwe navo vese inoratidza kukanganisa kumwe chete
Luis Antonio akadaro
Isa iyo iPhonePCSuite, unomhanya, uvandudze, ndakaita backup yeiyo iPhone asi inongogadzira maforodha chete, haichengetedze zvese zvirimo, ndinovimba mumwe munhu anoziva kuchengetedza zvese zvandinazvo pa iPhone zvakaita semanotsi, karenda , nezvimwe. Ini ndakatevera nhanho dzese asi hapana chinhu chinondiponesa, zvinongogadzira maforodha awakasarudza uye haina kana mafaera, kwaziso
Pindura kuna luis antonio
Zvese zvinhu zviri kundifambira zvakanaka ... asi diki nuance isina kukosha… Pane chero munhu anoziva Chinese?…. Kana kuti zvirinani ... pane chero munhu anoziva kuisa chirongwa chidiki muchiSpanish? ... zvimwe zvinhu zvinogona kuverengwa, asi zvimwe zvakawanda hazvigone, uye haugone kushandisa zvakazara maturusi aanotakura.
Nenzira, pachinzvimbo cheiyo icon pane iyo iPhone inonzi "system" (uye iyo inowanikwa mune aya mirairo) ... ini ndinowana imwe inonzi "PandaDaemon" ... izvi ndizvo here kana kuti ndakaita chimwe chinhu chisina kunaka?
Ndatenda zvikuru pamberi pezvirevo zvako… bye uye Goredzva Rakanaka 2009 🙂
Mhoro ... unoziva kuti ndinodzoreredza iphone 2g ku firmware 2.1 kana matambudziko uye ini ndaive ndakatsigira data rangu ne iphonepcsuite, asi ikozvino handikwanise kudzoreredza iro data ku iphone yangu uye harindipe chero kukanganisa ... Pane mumwe munhu angandibatsira here ?? !!. Salu2
Ndiri kufanirwa kuridhawunirodha pacomputer yangu ndomhanya naro here?… Nekuti kana zvirizvo, hapana zvarinondiitira, hapana .exe inovhura chero chinhu uye kana ndichida kuridhawunirodha ku iPhone, rinondiudza kuti haukwanise… Unogona kunditungamira here? Ndatenda!
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti ndingaite sei kuti ndiwanezve vandinoshamwaridzana navo uye karenda nekuti nekukanganisa kana ndichienzanisa, vese vokukurukura uye ajenda ekarenda akabviswa.
Mhoroi, ndakaita backup ku ihpone yangu uye pakanga pasina dambudziko, ipapo ndakadzorera uye zvakatora maminetsi akati wandei.Ndakafunga kuti zvese zvanaka, asi pandakazvifananidza nemitambo, ndakaongorora kuti ndakanga ndisisina mimhanzi kana mavhidhiyo uye ndangariro dzangu dzinenge dzizere ne "vamwe" uye hazvindibvumidze kutakura mimhanzi kana chero chinhu chandingaite, ndokumbirawo mundibatsire, ini ndatozvidzorera uye hapana, ndinoisa nekuvhura iphone zvakare uye hapana
Mhoroi, iniwo ndaive nematambudziko ekuisa iyo iphone pc suite, uye sezvinei kuisa kwacho kuri muChinese !!! zvimwe kana zvishoma kuti ndinozviona sei muchiSpanish ???
handikwanise kuisa iphone pc suite
Pindura kune saga2012
Hei, mwanakomana mukuru wehure, pindura mibvunzo iyo software yako isiri kushanda. Kufanana neni, zviri kundikundikana, kwete .exe iri kushanda nemazvo. Iwe unokosheswa kuteedzera pane yako wega posvo uye izvo izvo veruzhinji vanokubvunza iwe nezvazvo.
Pindura kuna ALERO
yangu pc suite inozvivhara yega uye ichivhura iyo yekuvandudza asi iyo yekuvandudza haina kufambira mberi haina kugadzirisa uye haina kunditendera kuti ndishandise iyo pc suite
Pindura kune crisoft
Ini handinzwisise Chinese ... kana chiJapanese ... kana ini handizive kuti mutauro upi ... unogona kujekesa zvimwe zvishoma?
Zvakanaka ... ndakakwanisa kuishandurira kuChirungu ... asi pandinobatanidza iyo iPhone ndinowana mamwe masikirini muchiChinese nemaviri sarudzo izvo zviri pachena kuti handizive kuti ndeipi yekutsikirira ... zvimwe zvacho zvakanaka.
hazvishande, kutumira kukanganisa
Pindura kuna juan manuel
Julian losabe akadaro
USASHURE KUSANGANA, SHAMWARI, HERE NDINOSIYA VHIDHIYO IYI KWAKO, KUTI UYE BACKUP NENZIRA INONYANYA http://youtu.be/iFAUwG5e6-E
Pindura Julian losabe
Multify inogadziridzwa kuti ienderane zvizere neIOS 8.4